संखुवासभा घ’ट’नाको सबै ना'ली'बेली: कार्की परिवारका ६ जनाको रह'स्म'य ह -त्या कसले गर्यो ?
संखुवासभा घ’ट’नाको सबै ना’ली’बेली: कार्की परिवारका ६ जनाको रह’स्म’य ह -त्या कसले गर्यो ?
काठमाडौँ – सोमबार बिहान मृ-त अवस्थामा फेला परेका सखुंवासभाको मादी नगरपालिकाका एकै परिवारका ६ जनाको श-व मंगलबार मात्रै उठाइने भएको छ । सामूहिक ह -त्याको घ-ट-ना अनु-स-न्धानका लागि विराटनगर र धरानबाट ख-टिए-को प्रहरी टो-ली पुग्न समय लागेपछि मंगलबार मात्रै श-व उठाइने प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
ह -त्या प्र-कर-णको अनु-स-न्धानका लागि संघिय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहालको नेतृत्वमा टो-ली खटिएको छ । अ-नु-सन्धा-नका लागि तालिम प्राप्त कुकुर पनि लगिएको छ । घ-ट-नास्थल सुरक्षाका लागि सानो संख्यामा प्रहरी टोली भने पुगिसकेको छ । कुकुरसहितको टोली पुगेपछि मात्रै वि-स्तृ-त अनु-स-न्धान सुरु हुनेछ ।
सोमबार बिहान मादी नगरपालिका १ उमलिङको खोला गाउँमा र बौद्धमान कार्कीको परिवारका ६ जनाको ह -त्या भएको थियो । ९३ वर्षीय वृद्ध बौद्धमान भने सकु-श-ल छन् ।
वौद्धमानकी श्रीमती ८४ वर्षीया पार्वती कार्की, छोरा ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्की, बुहारी ५२ वर्षीया कमला कार्की, तेजबहादुरकी बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, नाती ११ वर्षीय दीपेन कार्की र नातिनी ७ वर्षीया गोमा कार्की ह -त्या भएको हो ।
संखुवासभा घ’ट’ना : दुवै छोरा विदेशमा, घरमा ९० वर्षीय वृद्ध मात्रै जोगिए-मादी नगरपालिका-१, खोलागाउँका एकै परिवारका ६ जनाको ह -त्या घ-ट-ना अ-नु-स-न्धान गर्न धरानबाट तालिमप्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली संखुवासभा आउने भएको छ। ह’ -त्या भएको घ-ट-नास्थल मादी-१ मा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाको टोली मात्रै पुगेको छ।
आइतबार राति अ-ज्ञा-त स’मूहको ह’-ति’या-’र प्र’-हा’रबाट मादी-१ स्थानीय ५८ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीसहित ६ जनाको ह-‘त्या भएको थियो। घ-ट-नाको अ-नु-स-न्धानका लागि संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट एसपी दाहालको टोली तालिमप्राप्त कुकुर लिएर मादी आउँदै गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले जानकारी दिए।
घ-ट-नाको जानकारी पाएलगत्तै अ-नुस-न्धा-नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीको टोली सदरमुकाम खाँदबारीबाट घ-ट-नास्थल प्रस्थान गरेको छ। ह’-त्या भएका ५८ वर्षीय कार्कीको श-व सडकको भि-त्तामा मृ-त फेला परेको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले बताए। तेजबहादुरकी आमा ८४ वर्षीया पार्वती कार्कीको श -व घरमै फेला परेको छ।
५२ वर्षीया श्रीमती कमला कार्की र ३२ वर्षीया बुहारी रञ्जना कार्कीको श -व खो ल्सामा फेला परेको उनले बताए। त्यस्तै, तेजबहादुरका ११ वर्षीय नाति दिपेन कार्की र सात वर्षीया नातिनी गोमा कार्कीको श -व खरबारीमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। तेजबहादुरका बुवा ८९ वर्षीय बौद्धमान कार्की भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
रञ्जनाका श्रीमान् रमेश कार्की हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा रहेको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले जानकारी दिए। सदरमुकाम खाँदबारीबाट घ ट -नास्थल पुग्न ६ घन्टा लाग्छ। तेजबहादुर कार्कीका दुवै छोरा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। जेठो रमेश कार्की मलेसियामा र कान्छो नरेश दुवईमा छन्। रमेशका श्रीमती र छोराछोरीको पनि ह’-‘त्या भएको छ भने कान्छाका श्रीमती र एक छोरा जो-गि-एका छन्। नरेशका परिवार नै झापामा भएका कारण जोगिएको स्थानीय रुपेश कटुवालले जानकारी दिए।
घरमा भएका मध्ये भने ९० वर्षीय बृद्ध बौद्धमान कार्की मात्रै जो-गि-एका हुन्। बौद्धमानकी श्रीमती ८४ वर्षीया पार्वती कार्कीको पनि ह’ -‘त्या भएको छ। उनको श-व घरभित्रै फेला परेको हो। ५२ वर्षीय तेजबहादुरको श-व घर नजिकै सडकमा भेटिएको छ। तेजबहादुरकी श्रीमती ५२ वर्षीया कमला कार्की र ३२ वर्षीया बुहारी रञ्जना (रमेशकी श्रीमती) को श-व घर नजिकै रहेको खो-ल्सामा फे-ला परेको छ। रमेश र रन्जनाका ११ वर्षीय छोरा दिपेन र ७ वर्षीया छोरी गोमाको श- घर माथि मकै बारीमा फेला परेको छ।
अहिले प्रहरीले घ-ट-नास्थल सुरक्षित गरेको छ। बिहान स्थानीयले घ-ट-नाबारे थाहा पाएर उनलाई उठाउन गएपछिमात्रै घ-ट-नाबारे उनले परिवारका सबै मा -रिएको थाहा पाएका थिए। स्थानीयका अनुसार बौद्धमान गएराति ६ बजे नै सुतेका थिए। ‘हिजो राति खाना खाएर ६ बजे नै सु-त्नुभएको रैछ। बिहान स्थानीयले थाहा पाएर बोलाउन जाँदा पनि खेततिर गएका होलान् काम गर्न भन्नुभयो,’ वडाध्यक्ष कटुवालले भने,’घ-ट-नाबारे त मैले केही पनि थाहा पाइनँ भन्नुहुन्छ।’ एकै पटक मा-’रिएका कार्की परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य छ।
संखुवासभा ह-त्या प्र-कर’ण : कार्की परिवारको न कसैसँग रि’स’इ’बी थियो न वि-वा’द – संखुवासभाको मादी–१ खोलागाउँमा तेजबहादुर कार्कीको परिवारका सातै जनाले आइतबार सँगै खाना खाए। उनका पिता ९३ वर्षीय बौद्धमान कार्की भने छ बजे नै आफ्नो कोठातर्फ लागेका थिए। साेमबार बिहान मात्रै गाउँलेले परिवराका ६ सदस्यको श -व घर आसपासमा देखे।
स्थानीयका अनुसार राति नै अ-ज्ञा-त समूह आएर सु-त्ने तर-ख-रमा रहेका सबैलाई घरबाट नि-का-लेर धा -रि-लो ह -ति -यार प्र-हा-र गरेको हुन सक्छ। परिवारका सबै सदस्यको ह -त्या भएपछि ब-यो-वृद्ध बौ-द्धमान ठूलो त्रा-स-दीमा छन् यति बेला। आँखा रा-म्ररी नदेख्ने र का-न पनि असाध्यै कम सुन्ने उनी मात्र ब-चे-का छन्। बेलुका स-कु-शल सु-तेका कार्की परिवारको न कसैसँग रि-स-इ-बी थियो न वि-वा-द। कार्कीको घरबाट करिब पाँच सय मिटर पर मात्रै अरु घर छन्।
‘छिमेकीको घर नजिकै हुँदो हो त यस्तो वि-भ -त्स ह -त्या हुन पाउँदैनथ्यो होला’, स्थानीय कृष्ण पाठक भन्छन्। मादी–१ वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवाल पनि कार्की परिवारको कसैसँग वि-वा-द रहेको भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्की परिवारको कोहीकसैसँग वि-द थियो भन्ने सुनेका थिएनौं।’ वृद्धले परिवारका सबै सदस्य सँगै बसेर खाना खाएको र त्यसपछि कोठामा गएको बताएकाले रातिको समूहमा घ-ट-ना भएको अनु-मान स्थानीयको छ।
‘उहाँले हामीलाई आफूले खाना खाएर ६ बजे कोठामा गएको बताउनुभएको छ। का-न कम सु-न्ने र आँखा पनि राम्रोसँग देख्न नसक्ने कार्की ६ बजे नै खाना खाएर आफ्नो कोठामा गएर ब-च्न सफल भएको देखियो’, स्थानीय कृष्ण पाठकले भने। घ-ट-ना थाहा पाएलगत्तै बिहान ९ बजे घ-ट-नास्थल पुगेका कटुवालले भने, ‘घ-ट-नास्थलमा आइपुग्दा वि-भ -त्स तवरबाट ह -त्या गरिएको अवस्थामा श-व देखियो।’ उनका अनुसार तेजबहादुरको श-व बाटोमा फा-लि-एको थियो। दुई बच्चाको श-व ख-रबा-रीमा तथा बुहारी र श्रीमतीको सानो पानी ब-ग्ने खोलामा थियो भने आमाको श-व घरभित्रै थियो। घ-ट-नाको प्रकृति हेर्दा राति सुतेको बेलामा ह- त्या गरेको जस्तो नदेखिएको वडाध्यक्ष कटुवालले बताए।
उनका अनुसार ह -त्या गरिएका सबैले जुत्ताचप्पल लगाएका छन्। उनले भने, ‘तेजबहादुरको श-व ग-म्बुट जुत्ता लगाएको अवस्थामा छ, नानीहरुले पनि चप्पल लगाएका छन्।’ राति सु-त्नुअघि ह -त्या भएको हुन सक्ने उनले बताए। मृ-त-कका शरीरमा चो-ट-प-ट-क प्रस्ट देखिएको छ। उनले भने, ‘ह- ति-या-र प्रयोग गरी ह -त्या गरेको देखिन्छ।’ घ-ट-नास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका इन्सपेक्टर युवराज खतिवडा ने-तृ-त्वको टोली र नगर प्रमुख विदुरकुमार लिं-थे-प लगायतको टोली आएपछि प्रारम्भिक अ-नु-सन्धा-न सुरु गरेको वडाध्यक्ष कटुवालले बताए।
छिमेकीको घर कार्कीबाट टाढाटाढा रहेकाले सबैलाई बोलाएर जानकारी लिने काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। घ-ट-ना अ-नु-स-न्धान गर्न धरानबाट तालिमप्राप्त कु-कुरसहितको प्रहरी टोली झि-का-इएको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाले बताए। धा- रि-लो ह -ति-या-र प्र-हा-रबाट ५८ वर्षीय तेजबहादुर कार्की, ८० वर्षीया आमा पार्वता कार्की, ५६ वर्षीया श्रीमती मनमाया कार्की, २८ वर्षीया बुहारी रञ्जना कार्की, १० वर्षीय नाति दीपक कार्की र ५ वर्षीया नातिनी गोमा कार्कीको श-व सोमबार बिहान स्थानीयबासीले श-व देखेका थिए।